Otiv-Tana: misitraka fitsaboana ny mpikambana | NewsMada
Otiv-Tana: misitraka fitsaboana ny mpikambana
Tombontsoa lehibe ny omen’ny sampandraharaha momba ny vola Otiv Tana ho an’ny mpikambana ao aminy. Nanomboka ny taona 2012 ny fandaharanasa Fiombonana fahasalamana Harena, iarahan’ny Otiv Tana miombon’antoka amin’ny ONG Positive Planet International. Nanomboka ny taona 2016, manohana ny tetikasa ny Antokon-draharaha frantsay ho an’ny fampandrosoana (AFD) sy ny Fondation Positive Planet International United Kingdom (PPI UK).
Tanjon’ny tetikasa Fiombonana fahasalamana Harena ny fiantohana fitsaboana sahaza ny mpikambana. Kely ny fandraisana anjara, fandoavana latsakemboka 30 000 Ar isan-taona, nefa mahazo fitsaboana maimaimpoana ny mpikambana sy ny fianakaviany amin’ny fitiliana sy ny fahazoana fanafody eny amin’ny farmasia, ny fivarotam-panafody, eny amin’ny toeram-pitsaboana an’ny fanjakana sy ny tsy miankina. Fiaraha-miasa amin’ny dokotera tsy miankina miisa 110, hopitaly, klinika ary toeram-pitsaboana (59), CSB an’ny fanjakana (6) ary farmasia sy fivarotam-panafody 59.
Nankasitrahana ny mendrika
Miisa 11 500 ankehitriny ny mpahazo tombontsoa amin’ity tetikasa ity avy amin’ny mpikambana 5 300 ao anatin’ny Otiv Tana.
Natao, omaly eny amin’ny foiben’ny Otiv Tana Ampasanimalo, ny fihaonamben’ireo mpisehatra ao anatin’ity fandaharanasa goavana ity. Fotoana nanamafisana ny fiaraha-miasa sy nizarana fahaiza-manao, sady nankasitrahana ireo mpiara-miombon’antoka mendrika rahateo. Anisan’ny hobanjinin’ny Fiombonana fahasalamana Harena amin’ny ho avy ny hanatrarana ny tanjona, Fitsaboana faobe manerana an’i Madagasikara, na Couverture santé universelle à Madagascar (CSU).